Maxaa ku cusub Raspberry Pi 3 | Laga soo bilaabo Linux
210 | | GNU / Linux, Noticias, dhowr
Maalmo uun ka hor, waa la qabtay l ahsoosaarida Raspberry Pi 3 cusub, el pequeño kombuyuutar ujeedooyin badan oo horseeday mashaariic tiro badan. Waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan bilaabitaankeedu waa inay ilaaliso, jeceshahay dadka isticmaala, qiimihiisu waa 35 doolar sida Raspberry Pi 2. Kuwaas oo aan ku dari karno dhowr doolar si aan ugu darno korontada, qeybta keydinta iyo kiiska. Waxaa xusid mudan in Raspberry Pi 3 uu siinayo iswaafajin dhameystiran Raspberry Pi 1 iyo Raspberry Pi 2.
7-bit ARM Cortex - A32 quad-core processor kaas oo lagu badalay a ARM Cortex-A53 afar geesle 64-bit 1,2 GHz, processor-ka toban jeer ka awood iyo waxqabad fiican kan Raspberry Pi 1. Kaas oo loo tarjumay a50% kororka wax soo saarka, mahadnaqa hagaajinta dhismaha iyo 33% kororka xawaaraha saacadda. Waxay kaloo leedahay a 4.1 Bluetooth, 3,5mm maqal ah, Dhisay-WiFi iyo 1 GB oo RAM ah.
Raspberry Pi 3 waxaa taageera Broadcom, shaqaalaynaya nuevo BCM2837 SoC. Kaas oo leh qaab dhismeedka aasaasiga ah ee moodooyinka BCM2835 iyo BCM2836.
Sidoo kale VideoCore ayaa loo isticmaalaa sidii Fiidiyowga Core IV 3D waa shaxanka 3D-ga kaliya ee si guud loo diiwaangeliyey ee SoC-yada ku saleysan ARM. Halka BCM2837 ay maamusho inta badan nidaamka hoose ee 'VideoCore IV'. Tan oo ah 400MHz iyo udub dhexaadka 3D ee 300 MHz. Marka laga hadlayo moduleka xisaabinta, waxaa lafilayaa in bilaha soosocda module ku saleysan BCM2837 lagu daro.
Kuwa ka walwalsan haddii noocyadooda Raspberry la joojiyo, waxaa la caddeeyay in kuwii ka horreeyay ee nooca Pi 3, PI-ga 1 iyo 2, wali way jiri doonaan. Isku soo wada duuboo moodelladan ayaa sii socon doona illaa inta baahi loo qabo iyaga. Qiimaha nooc kasta waa sida soo socota: waayo, Raspberry Pi 1 kharash ah 25 Dollar, ee Raspberry Pi 2 kharash 35 Dollar, iyo isaga tusaalaha A + kharash ah 20 Dollar.
Waa lagama maarmaan in la isticmaalo noocyadii ugu dambeeyay ee NOOBS iyo Raspbian si loo hubiyo waxqabadka ugu wanaagsan iyo iswaafajinta Raspberry Pi 3.
Dhab ahaantii toda jawharad Internetka Waxyaabaha jecel (IoT).
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Maxaa ku cusub Raspberry Pi 3
xayoo 45 dijo
Waa inay dhigaan 2g wan oo ay noqonayso martida
Ku jawaab xperic45
waa inay dhigtaan 1.5 gb wan, kaliya 1 gb nidaamka 64-bit kuma filna.
Shaki ayaan ka qabaa, Iphone 5s wuxuu adeegsadaa 64-bit iOS ah kumana dhibtoodo inuu haysto 1Gb oo RAM ah. Xaaladdan oo kale uma maleynayo in RPi 3 uu xanuunsanayo tan iyo markii Raspbian loo soo ururiyey qaab-dhismeedkan isla markaana loo habeeyay HW, taas oo Ubuntu, Fedora, Arch aysan dhicin.
Waan ku raacsanahay 1Gb xoogaa wuu gaaban yahay, waana waxa igu soo tuuraya. Ayuub 2Gb ah ayaa fiicnaan lahaa.
Ku jawaab javicho
1GB oo RAM ah ayaa ku filan waxyaabo badan. Waxaan hayaa nooca loo yaqaan 'Raspberry Pi 1' oo ah nooca 'B' oo ah barta marin-u-helka wireless, dhcp / dns server, wakiil web cache (squid), firewall, server NTP, server daabacan iyo server scanner network; runtiina si la yaab leh ayey u socotaa.
Jawaab José Luis Gonzalez
Ma jiraa qof horeyba u tijaabiyay? Waxaan hayaa tii hore, anigoo adeegsanaya openelec ... Haddii qof isku dayo, faallo 🙂